व्हाट्सएप समूहहरु। ? व्हाट्सएप समूहमा सामेल हुनुहोस्
Whatsapp समूहहरू। WhatsApp यो विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग भएको इन्स्ट्यान्ट मेसेजिंग मोबाइल अनुप्रयोग हो, यसको परिणाम हजारौंमा आएको छ व्हाट्सएप समूहहरू कि सक्षम हुन प्रयोगकर्ताहरू सिर्जना गरेका छन् साथी बनाउनुहोस् र कुरा गर्नुहोस् केहि थिमहरु, स्वाद वा चासो मा।
हामीले कम्पाइल गरेका छौं सबै भन्दा राम्रो Whatsapp समूहहरू ताकि हाम्रा पाठकहरू उनीहरूको चासो समूहमा सामेल हुन सक्छन्।
तपाईं यो सबै प्लेटफर्ममा पाउनुहुनेछ ग्रुप्सफ्वाट्सएप। अनलाईन:
1 व्हाट्सएप समूह: पूर्ण गाइड
2 व्हाट्सएप समूहहरू के हुन्?
3 व्हाट्सएप समूहमा कसरी सम्मिलित हुने?
4 Whatsapp लिंक समूहहरु
4.1 व्हाट्सएप समूहका लिंकहरू के हुन्?
5 व्हाट्सएप समूहहरू कसरी सिर्जना गर्ने?
6 व्हाट्सएप समूहहरूलाई कसरी म्यूट गर्ने?
7 कसरी एक WhatsApp समूह छोड्ने?
7.1 के तपाइँ उनीहरूलाई ध्यान दिए बिना नै व्हाट्सएप समूह छोड्न सक्नुहुन्छ?
8 व्हाट्सएप समूहमा सम्मिलित हुनुहोस्
9 व्हाट्सएप समूह लिंक सिर्जना गर्नुहोस्
व्हाट्सएप समूह: पूर्ण गाइड
यो पृष्ठ हो व्हाट्सएप समूहहरूको लागि पूर्ण गाईड। यहाँ तपाईले जान्नु पर्ने सबै कुरा जान्नु हुनेछ समूहहरूमा सामेल हुनुहोस् र उनीहरूमा भाग लिनुहोस् उनीहरूलाई पूर्णतया मास्टर गर्न। तपाईं पनि एक पाउन सक्नुहुन्छ सामेल हुनको लागि उत्तम व्हाट्सएप समूहहरूको साथ पूर्ण सूचीविषयवस्तुहरू द्वारा विभाजित। यदि तपाईं यो पूर्ण गाइड पढ्न चाहनुहुन्न र हाम्रो सूची ब्राउज गर्न सुरू गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाई खोजी गर्न सक्नुहुन्छ।
Whatsapp समूह खोजीकर्ता
व्हाट्सएप समूहहरू के हुन्?
व्हाट्सएप समूहहरू समूहहरू हुन् जुन कुनै पनि प्रयोगकर्ताले मोबाइल अनुप्रयोगको कुराकानी गर्नका लागि सिर्जना गर्न सक्दछ एक निश्चित विषय मा साथी वा बिभिन्न प्रयोगकर्ता बीच।
हामी सबैसँग छ विशिष्ट व्हाट्सएप समूहहरू जस्तै परिवार समूह, स्कूल साथीहरूको समूह, फुटबल टोली समूह, वा सप्ताहन्त ह्या hangआउट्सको समूह ... तर व्हाट्सएपको साथ तपाईं सक्नुहुन्छ सबै प्रकारका शीर्षकहरूमा समूहहरू सिर्जना गर्नुहोस् र विश्व को कुनै पनि बाट प्रयोगकर्ताहरु लाई मानिसहरुसंग भेट गर्न, साथी बनाउन र समूहको विषयवस्तु छलफल गर्न अनुमति दिनुहोस्।
व्हाट्सएप समूहमा कसरी सम्मिलित हुने?
जब कोही एक व्हाट्सएप समूह बनाउनुहोस्, समूहमा व्यक्ति थप्नुहोस् जुन उसले आफ्नो सम्पर्कहरूको सूचीमा छान्छ जुन त्यो समूहमा भाग लिन चाहन्छ। अहिले सम्म कोहीले तपाईंलाई एक विशेष व्हाट्सएप समूहमा तपाईलाई अनुमति माग्दै बिना थप्न सक्छ, तर WhatsApp तपाईं पहिले नै नयाँ अपडेटमा काम गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ निश्चित समूहमा थप्नु अघि तपाईंले अनुरोध स्वीकार्नुपर्नेछ। जब समूह सिर्जना हुन्छ, समूह प्रशासकले नयाँ समूहहरूको लागि त्यो समूहमा सामेल हुनको लागि समूह पहुँच लिंक साझेदारी गर्न सक्दछ। यस पृष्ठमा तपाईं हजारौं समूहहरूको लिंकहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं सामेल हुन सक्नुहुन्छ।
Whatsapp लिंक समूहहरु
व्हाट्सएप समूहका लिंकहरू के हुन्?
लि WhatsApp्क वा व्हाट्सएप समूहहरूको लिंक ती हुन् (मैले पहिले नै तपाईंलाई भनेको छु), लि )्कहरू जुन प्रशासकहरूले साझा गर्छन् ताकि अन्य व्यक्तिहरू त्यस समूहमा सामेल हुन सकून्। यदि तपाईं एक को प्रशासक हो व्हाट्सएप समूह तपाईंले आफ्नो मोबाइलमा सिर्जना गर्नुभएको, तपाईं सक्नुहुन्छ अन्य मानिसहरूलाई आमन्त्रित गर्न त्यस समूहबाट लिंक प्राप्त गर्नुहोस् निम्न चरणहरूका साथ:
तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको समूह प्रविष्ट गर्नुहोस्।
माथिको समूहको नाममा क्लिक गर्नुहोस्।
मा क्लिक गर्नुहोस् "साझा गर्न" शीर्षमा।
विकल्प छान्नुहोस् Link लिंक साझा गर्नुहोस् वा विकल्प «प्रतिलिपि लि link्क.
व्हाट्सएप समूहहरू कसरी सिर्जना गर्ने?
यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने एक व्हाट्सएप समूह बनाउनुहोस्, तपाईं तलका चरणहरू अनुसरण गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ:
मा क्लिक गर्नुहोस् "समूह बनाउनुहोस्" तपाईंको व्हाट्सएप अनुप्रयोगको शीर्षमा।
तपाईंको सम्पर्कहरू बीच समूह सहभागीहरू थप्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् "पछी".
समूहको नाम र समूहको लागि फोटो प्रविष्ट गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् "सिर्जना".
यो सकियो, तपाईं साझा गर्न सक्नुहुनेछ मा तपाईंको WhatsApp समूहको लिंक वा लिंक ग्रुप्सफ्वाट्सएप। अनलाईन
व्हाट्सएप समूहहरूलाई कसरी म्यूट गर्ने?
कहिलेकाँही, व्हाट्सएप अधिसूचनाहरूको आवाज धेरै कष्टकर हुन सक्छ जब तपाईं निरन्तर विभिन्न समूहहरूबाट WhatsApp प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यो गर्न सजिलो समाधान छ किनकि तपाईं सक्नुहुन्न तपाईंको व्हाट्सएप समूहहरूलाई म्यूट गर्नुहोस्। Para एक व्हाट्सएप समूह मौन गर्नुहोस्, तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ:
तपाईं चुप गराउन चाहानु भएको वाट्सएप समूह प्रविष्ट गर्नुहोस्।
विकल्प छान्नुहोस् "मौन".
मौंन बीचको विकल्प छान्नुहोस् «Hours घण्टा», «१ हप्ता o "1 वर्ष"।
अर्को तरिका एउटा समूह मौन गर्नुहोस् यो निम्नानुसार छ:
बायाँ हटाउन समूहमा तपाईंको औंला स्वाइप गर्नुहोस्।
मा क्लिक गर्नुहोस् "प्लस".
मा क्लिक गर्नुहोस् "मौन".
कसरी एक WhatsApp समूह छोड्ने?
एक व्हाट्सएप समूह छोड्नुहोस् यो धेरै सरल छ। तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ:
मा क्लिक गर्नुहोस् "समूह छोड्नुहोस्".
के तपाइँ उनीहरूलाई ध्यान दिए बिना नै व्हाट्सएप समूह छोड्न सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईं सोच्दै यस समूहमा अन्य सहभागीहरू बिना नै व्हाट्सएप समूह छोड्न चाहनुहुन्छ भने, मलाई दुःख लाग्छ यस समयमा त्यस्तो कुनै विकल्प छैन। जब तपाईं समूह छोड्नुहुन्छ, बाँकीले त्यो समूहमा सन्देश प्राप्त गर्दछ कि तपाईंले समूह छोड्नुभयो भनेर।
व्हाट्सएप समूहमा सम्मिलित हुनुहोस्
हाम्रो प्लेटफर्ममा व्हाट्सएप समूहमा सम्मिलित हुनुहोस् यो धेरै सरल छ।
तपाईंले मात्र खोजी ब्राउज गर्नुपर्दछ बीचमा व्हाट्सएप समूह प्रकाशित, र जब तपाई सामूहिक रुपमा सामिल हुन चाहानुहुन्छ समुह भेट्टाउनुहुन्छ, क्लिक गर्नुहोस् "समूह लिंक"। तपाईंलाई सीधा व्हाट्सएपमा रिडिरेक्ट गरिनेछ र तपाईंलाई यो समूहमा सामेल हुन चाहानुहुन्छ भनेर यकिन गर्न सोधिनेछ।
[व्हाट्सएप समूहमा सम्मिलित हुनुहोस्]
व्हाट्सएप समूह लिंक सिर्जना गर्नुहोस्
यदि तपाईंले फेला पार्नु भएन भने व्हाट्सएप समूह तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ, म तपाईंलाई आफैं सिर्जना गर्न आमन्त्रित गर्दछु र यसलाई हाम्रो प्लेटफर्ममा साझा गर्नुहोस् ताकि नयाँ सहभागीहरू थप्न सकून्। तपाईं सक्नुहुन्छ एक व्हाट्सएप समूह बनाउनुहोस् र प्रकाशित गर्नुहोस्।